Dr. Tint Swe's Writings: Onycholysis ခြေသည်း-လက်သည်း လန်ခြင်း
Onycholysis ခြေသည်း-လက်သည်း လန်ခြင်း
Q: ခြေသည်း လက်သည်းတွေမှာ Onycholysis ဖြစ်တာရယ် Splinter haemorrhage ဖြစ်တာရယ်ကို ဘယ်လို ကုသရင် ပျောက်ကင်းနိုင်မလဲ ဆိုတာလေးကို ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဘောလုံးကန်တယ်ဆရာ။ အဲဒါ ထိမိ ခိုက်မိပြီး ခြေသည်း လန်တာတို့ သွေးခြေဥတာတွေကနေ အစောက ပြောသလိုမျိုးတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြောရရင် ပုံမှန် ပြန်မဖြစ်တော့ဘူး။ ဘယ်လိုဆေးမျိုး သုံးပြီး၊ ဘယ်လိုနေထိုင်ရင် အဆင်ပြေနိုင်မလဲ သိချင်ပါတယ်။
A: Nail lifting လို့ခေါ်တဲ့ ခြေသည်း-လက်သည်း လန်ခြင်း Onycholysis ဆိုတာ ဖြစ်လာရင် ကွာတက်နေတဲ့ ခြေသည်း-လက်သည်း အောက်မှာ ရေ၊ အညစ်အကြေးနဲ့ ပိုးမွှား ဝင်လာနိုင်တယ်။ ဘောလုံးကန်၊ ခိုက်မိရာကနေဖြစ်တာ မဟုတ်ဘဲ၊ နှင်းကူစတဲ့ တခြား အရေပြားရောဂါတွေနဲ့လဲ တွဲဖြစ်တတ်တယ်။ လည်ပင်းကြီး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ ကင်ဆာ စတဲ့ ရောဂါတွေနဲ့လည်း တွဲတတ်သေးတယ်။ လက်သည်း-ခြေသည်း အလှပြင်ရင် လွန်သွားတာမို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဗီတာမင် အေ ကနေလည်း ဖြစ်သတဲ့။ အရွယ်-ကျား-မ မရွေးဖြစ်ပေမဲ့ အမျိုးသမီးများ ပိုဖြစ်တယ်။ ဘယ်လိုကုမလဲဆိုတာဘဲ မေးတာကို ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် ရေးရတာကတော့ ဖြစ်စေတတ်တာကို ရှောင်ပါလို့ ပြောချင်လို့ပါ။
ကိုယ့်ဖါသာ လုပ်နိုင်တာတွေရှိတယ်။ ကွာထွက် ပိုရှည်နေတဲ့ ခြေသည်း-လက်သည်းကို မကြာမကြာ(၁ ပါတ်တခါ) ဖြတ်ပါ။ နေရာကို နေ့တိုင်း ဆပ်ပြာနဲ့ရေ သုံးဆေးပါ။ ခြောက်သွေ့အောင် အသာအယာလုပ်ပါ။ ဖြစ်တဲ့နေရာကို အကာကွယ် လုပ်ပါ။ (ကော်တွန်) ခြေအိတ်၊ လက်အိတ်သုံးပါ။ ရေမစိုရင် ပိုကောင်းတယ်။ တခြားသန့်ရှင်းစေတဲ့ဆေး အပြင်စား မသုံးပါနဲ့။ လိုအပ်မှ ဆရာဝန်ပြပါ။ ဗက်တီးရီးယားဆေး၊ ဖန်းဂတ်စ် (မှို) ဆေး ပေးပါလိမ့်မယ်။
• Imidazole or Allylamine တွေက မှိုအတွက် လိမ်းဆေးတွေပါ။ fluconazole, itraconazole, terbinafine တွေက မှိုအတွက် စားဆေးတွေ။
• Pulsed dye laser treatment နဲ့ Psoralen plus ultraviolet A (PUVA) treatment ဆိုတဲ့နည်းတွေ ထိရောက်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဘောလုံးသမားဆိုရင် မဖြစ်ခင်ရော၊ ဖြစ်ပြီးရော နေရာကို မထိခိုက်အောင် ဂရုစိုက်ပါ။ ခြေသည်း တိုတိုသာ ပုံမှန်ဖြတ်ပါ။ အစိုလုပ်ငန်းလုပ်လို့ vinyl gloves သုံးရသူတွေ၊ အောက်မှာ light cotton gloves ခံသုံးပါ။ သိပ်ဆိုးတဲ့သူများကို Triamcinolone 2.5-5 mg/mL ဆေးကို ဆားရည်နဲ့ဖျော်ပြီး ဖြစ်တဲနေရာကို ၂ ပါတ် ၁ ခါ၊ ၄-၅-၆ ခါ အပ်သေးသေး 30-gauge needle နဲ့ ထိုးပေးတယ်။ ထုံဆေးရောရတယ်။
• Clobetasol ointment ဆိုတာက corticosteroids ပါတဲ့ပြင်းတဲ့လိမ်းဆေး။ သူထက်ပြော့တာသုံးနိုင်တယ်။
Patient-Doctor communication လူနာ-ဆရာဝန် ဆက်သွယ်ရေး
Cancer and Diet ကင်ဆာ နဲ့ အစားအစာ
Cancer tests ကင်ဆာ စစ်ဆေးခြင်း လမ်းညွှန်သစ်
ANC 2015 ၂ဝ၁၅ ဖွါး သားကောင်းရတနာ
New Year Wishes ဆုတောင်းပေးသူ ဆုတူရပါစေ
Museum of Menstruation ရာသီပြတိုက်
Vulvovaginitis အမျိုးသမီးအင်္ဂါ ရောင်ခြင်း
Q and A အမေး-အဖြေများ
Calcium blood test (ကယ်လ်စီယမ်) စစ်ဆေးခြင်း
Erectile Dysfunction ပန်းသေ-ပန်းညှိုး
Erectile Dysfunction Medicines ပန်းသေ-ပန်း ညှိုးအတ...
Cialis (Tadalafil) ပန်းသေပန်းညှိုးအတွက်ဆေး
Let me see လူမမာနဲ့တွေ့ပါရစေ
Iron supplement and Liver diseases သံဓါတ်နဲ့ အသည်း...
Similarities and Differences တူသောအရာများနဲ့ မတူသေ...
Fluid in the ear နားထဲမှာအရည်ရှိတာ
Life choices behind more than4in 10 cancers နှစ်...
Fluorosis (ဖလိုရိုက်) များရောဂါ
Ms Igarashi was charged with obscenity ဂျပန်အမျိုး...
Buddha and Banana
Vaginal discharge Q and A အဖြူဆင်းခြင်း အမေး-အဖြေ
My Facebook postings selected one for each month i...
Hepatitis C links အသည်းရောင် (စီ) စာများ
Loudspeakers မြန်မာပြည်မှာ အော်စရာတွေကများ
Ascites Causes ရေဖျင်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ
Colors of the Rivers မြစ်တို့၏အရောင်များ
Eating own eggs ဇာတ်တူသားစားခြင်း
Bullets for votes ၂ဝ၁၅ အတွက် မဲကို ကျည်ဆံနဲ့လဲနေပြီ
2015 Syndrome အမတ်ရောဂါ ဆင်ဒရုမ်း
Hyperthyroidism and Fertility လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်...
Thyroid Function Tests လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်း စစ်ဆေ...
Thyrox လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်းဆေး တသက်လုံးပေး
Big Government ကိုးဆယ့်ခြောက်ပါးရောဂါ သို့မဟုတ် အစ...
Infective conjunctivitis မျက်စိကျိန်းခြင်း
Eye Drops for Glaucoma မျက်စိရေတိမ်အတွက် မျက်စဉ်းများ
Eye Allergies မျက်စိနာ မဟုတ်တဲ့ မျက်စိ (အလာဂျီ)
Dry eye syndrome မျက်ရည်ခြောက်နေခြင်း
Artificial eye မျက်လုံးအတု
Eye diseases writings မျက်စိနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆေးပညာစာများ
Rheumatoid arthritis ရူမက်တွိုက် အဆစ်နာ
Rheumatic fever ရူမက်တစ် အဖျားရောဂါ
Syphilis test results ဆစ်ဖလစ် စမ်းသပ်နည်းအဖြေ
Autism link to air pollution လေထုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ (အော...
Vimax and Breast ကျားဆေး-မဆေး ကြော်ငြာပြီးရောင်းတဲ...
First Aid Sharing on Anroid App ကျန်းမာရေးစာတွေ ထပ...
Drug names ဆေးနာမည်ရင်းကိုသိပါ
A-Ra collagen ထိုင်းကလာတဲ့ ကြော်ငြာဆေး
Colors of your nails လက်သည်းအရောင်
Nail cosmetics လက်သည်းအလှပြင်ခြင်းနဲ့ ကျန်းမာရေး
Skin Whitening Injection အသားဖြူဆေး
Evening primrose oil ညနေခင်း နှင်းဆီ
Online culture အွန်လိုင်း ရိုင်းရာမကျသင့်
The Moon in my Room ဝါးလုံးခေါင်းထဲမှာသာတဲ့လ
The End ပြီးလေပြီလား
Spelling by force ရေးတော့အမှန် ဖတ်တော့အသံ၊ အာဏာနဲ့...
We the Soldiers အာဏာလွှဲခြင်း
Minipill ကိုယ်ဝန်တား အသေးစား ဆေးပြား
1988 and 1990 ၁၉၈၈ နဲ့ ၁၉၉ဝ ကို အသေရေဖျက်ခြင်း
Mask of pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ တင်းတိပ်
Contraceptives for women with STI/HIV လိင်ကတဆင့်ကူ...
Mother မာတာပီတုဂုဏော အနန္တော
Ladies second အမျိုးသမီးတွေကို မေတ္တာပိုလာပါသတဲ့
NCGUB ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည်အဓိက (သို့မဟုတ်) အဝေးရောက်...
Stress, depression and the holidays အားလပ်ရက်များန...
Birth control pills for emergency contraception ပံ...